MotioCAP - Cognos Kusimbiswa - Motio
musha 9 Products 9 MotioCAP - Cognos Kusimbiswa
MotioCAP uye MotioCAP-SAML - Cognos Kusimbiswa
Tsika yekusimbisa vanopa uye SAML mhinduro dzeCognos.
Pane dzimwe nguva apo vatengi veCognos vanosangana nedambudziko rekubatanidza maCognos pamwe nechengetedzo yezvivakwa. Motio inoshandisa ayo makore eakadzika eCognos ruzivo kupa-kutendeuka-kiyi mhinduro, yakagadziriswa kune yako chaiyo zvaunoda, uye zvakatsigirwa zvizere.
Kana zvasvika pakuchengetedza Cognos, Motio ine ruzivo rwekubatanidza neyekuchengetedza mupiki wako uchishandisa yedu MotioCAP or MotioCAP-SAML mhinduro, zvinoenderana nezvinodiwa uye zvido zvako.
Motio inosunungura iwe kubva panguva yekunyura yekuzviitira wega, kana mutengo wekuhaya chengetedzo tarenda inogona kunge isipo apo Cognos inogadziridzwa kana dzimwe nyaya dzikamuka. Motio anoziva chaizvo maitiro ekuivaka nemazvo. Uye isu tiripo nguva dzose kuti tibatsire kukuchengeta iwe zvakanyatsobatanidzwa neako wekuchengetedza mupi.
Kana yako sosi yekusimbisa yakasarudzwa isingawanikwe muCognos unotarisana nekodhi yako yemubatanidzwa. Izvi zvinoda hushoma uye hunyanzvi seti yehunyanzvi iyo inoziva pane mashandiro uye API mazinga echokwadi echokwadi uye Cognos Analytics.
Motio inosunungura iwe kubva mukuwana iye mushambadzi akakodzera, iyo nguva uye kuyedza kunodikanwa kuti uivake nekuichengeta sezvo Cognos inoburitsa vhezheni nyowani. MotioCAP uye SAML masisitimu anovimbisa kuti kusangana kwako kunoitwa nemazvo uye nenzira kwayo kudzivirira maburi eruzivo ekuti Cognos inoshanda sei nekuchengetedza. Sevha nguva, kushanda nesimba uye uve wakachengeteka.
Nyanzvi muIBM Cognos Authentication Vanopa & SAML
Kana zvasvika pakuchengetedza vatengi vedu hapana nzvimbo yekukanganisa. Isu takasarudzwa nemapazi eU.S.Masoja, Makambani eFortune mazana mashanu pamwe nemasangano edzidzo neyemari kupa ruzivo rwekuchengetedza rwavanoda muCognos.
Kuenderera mberi Kutsigira & Chengetedzo
Kugadzira kusangana uye kupa chinodiwa chekuchengetedza chiitiko hakusi iko kuguma. Vatengi vanovimba uye vanotipa isu kuyedza, kuchengetedza uye kugadzirisa kwavo kusangana sekudikanwa nekuburitswa kutsva kweCognos.
Kusangana Nezvako Zvekuvimbika Zvido
Motio Tsika Kusimbisa Vanopa vanopa kusanduka uye kuchinjika kugonesa kusimbiswa kweCognos kupokana nezvakawanda zvisiri-zvakajairika masosi:
ZZvehukama Dhatabhesi Matafura
ZKusaina-Kuvhura (SSO) masosi